DOORASHADA GUDDOOMIYAHA JIILUL AMAL – Hope Generation – جيل الأمل
DOORASHADA GUDDOOMIYAHA JIILUL AMAL
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16/07/2016 Qabsoomay Shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee Ururka.
Ujeedada shirka ayaa ahayd Doorashada Guddoomiyihii badali lahaa Guddoomiye Sayyid Ali Hussein Gaanabe oo xilka soo hayey Muddo Sanad ah.
Waxaa cod aqlabiyad ah kusoo baxay Guddoomiyaha Cusub ee Ururka mudane C/qaadir Maxamed Shaylilaah oo kal hore si ku meelgaar ah muddo sadex bilood ah Ururka usoo Hoggaaminayey.
Si Guud Ururka wuxuu ammaanayaa Shaqadii xoogga lahayd ee lasoo qabday xilligii Sayyid hoggaaminayey ururka, Sidoo kale Wuxuuna Hambalyeynayaa islamarkaana u duceynayaa Guddoomiye Shaylilaah xilka cusub ee loo igmaday.
Waa maalin Taariikhi ah, Waxaa isku soo beegmay Ilaahay amarkii maalintii la fashiliyey af-gambigii dhicisoobay ee Turkiya iyo Doorashada Guddoomiyaha Ururka Dhalinta Rajjo Soo celinta Soomaaliyeed (Jiilul Amal)
Ururka Wuxuu tusaale u yahay dhalinyaradda soomaaliyeed, Doorashadanna waa tii 4-aad ee uu uruku galo. Waxaan aaminsanahay in dhalinyaradda dhaqankoodu noqdo Inay is doortaan. Iyadoo taa laga amba qaadayo, Ururku wuxuu qaban doonaa maalmaha soo socda xaflad xil wareejin ah hadduu rabbi idmo.
Hambalyo Dhamaan Xubnaha Ururka Ee kula jira Golaha dhexe, Golaha Fulinta, Golaha Guud iyo Degmooyinka Gobalada.